トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Kana kuona kuti akakwereta mari chii kune nzira iri kuongorora
Kana uchitsvaka caching, vatengi riri pamusoro kuongororwa iri worrisome.
ari pane havana kupfuura kuongorora pasinei ezvinhu dambudziko pasina mari yakakwana, mari haigoni vachamutswa.
Naizvozvo, ngatigarei kuziva pachine pamusoro kunyange zvishoma kana kuongororwa angangodaro sezvo, kana dhigirii iri repamusoro panogumira mari pakutsvaga kuongorora.
, uye kwete ini kudzorera neatly mari, vachaparidza pakupindurwa kurasikirwa moneylenders.
Naizvozvo, yakaderera uye zvisina kugadzikana mari, zvingangoita kuti kubatwa mukuru-ngozi shamwari nokuti nounyanzvi.
Naizvozvo, tapota ramba kudzvanya nokuti chinonyanya kuti une nzira dzakadai zvinotevera zviri moneylenders. High uye pasi pamusoro
mari: dzakanga Uprofita muganhu,
kwemari pakutanga kuva yepamusoro zvichienderana chaiko yepazasi muganhu kana yakaderera kana kugadzikana: Kana iwe usiri kugadzikana, rezasi pokupedzisira kana kuramba review, yakatsiga uye nyaya iri kupfuura kudzokororwa pasi
pfungwa kuti kuwedzera pokupedzisira haringorevi mari, havazivi chii pfungwa nekuti kwemari unogona kuvawo mumwe.
Izvi Zvechokwadi, vaya pamwedzi muhoro hurongwa, akadai yakazara uye vashandi pfupi, zvikaonekwa kuti pane mari kunyange vanhu vanoshanda mune nenguva, zvakadai sechimwe-nguva uye basa chikamu-nguva.
Zvisinei, mushandi Dattari itsva kudzidza kambani, kunowanzova tikaongorora zvichava zvikuru uye kana aiva kurutivi chikamu, akadai nokuchinja kubasa nguva zhinji.
Nechikonzero chimwe chete, ndiko kunotonyanya bedzi proprietorship kuri zvakaoma sezvo ongororo. For
yakawanda kwemari, acharikanganwirwa zvakaongororwa nokuzviisa pasi akadai muripo stubs kana achinyima pitikoti.
In chikamu mutengi mari, kana pasina chikanganiso kumabasa kuti akanzi, hakuna muduku nyaya munobuda kuti kuongorora kunyange nokukwereta asina kuzviisa pasi magwaro kuratidza mari.
bhuku / mari proof'll chengeta kuziva usati kwereta mari
bhuku / < mumwe href = "http: //xn--t8ja5qbdc8bd3083eea5016pfa.com/cooltaiwan/11th_hours.html "> caching
avo kuti vanoda nguva kukwereta mari uye
mari Lenders wava kuvazivisa kubva muupenyu hwezuva nezuva, kana hapana dambudziko kunyange vanokweretesa mari, uri mumwe nzira dzekuziva kunzvera .
somuenzaniso mashoko, mumwe uye kuti ndiko kuisa kuisa imba, vari vachidzokorora basa shanduko chinoitwa kuti zvakaipira ari kuongorora pane mukana kuti tibvise .
Uyezve, kuwedzera pane izvi, pane nyaya kuti kwave nhoroondo tsaona, akadai mutsividzo iri rakabayirwa mumwe uye chikwereti mashoko nevaari vane zvakaitika nokukwereta kare, sezvo murume Flit ngozi iwe kuti aizorambwa ari kuongororwa .
zvakare, kana uri nokukwereta kushanda mune vakawanda nemari masangano pfupi nguva, iwe uchava kwenguva duku nokukwereta inodonongodzwa .
Izvi, tsaona Kusiyana kare, nehafu gore Yakanyorwa munenge rimwe gore kubva vachatitaka asisiri, asi kuti mari uye vanoita kudzokorora chikumbiro pakati, ane ngozi iyoyo anova refu kunoitika .
Saka, Edza kuisa kamwe nguva Ini chete akaramba kudzokorora. kana pane zvakadai
tsaona history, saka unogona kuona kubva neimwe sangano pfungwa kuonana kana Homepage muzive anoenderana .
saka kure nokukwereta ezvinhu
Kunyange kana pasina chinetso
kwemari nomumativi maitiro pamusoro, uyu kusvika borrowings, pane kudzokorora anova Muzviitiko zvakaipisisa.
Pamurairo ano, nokuti rava mutemo asingagoni kwereta chete kusvika chimwe muzvitatu gore negore mari sezvo yaipedzerwa mutemo. Kunyange zvazvo mubvunzo
nemumuromo pane pfungwa iri uchibvunzwa ngwarira nokuti kazhinji haana kuudzwa somugumisiro kuongorora.
Zvisinei, pane zvakaitika kune mumwe nomumwe mabhizimisi varidzi kukwereta sezvo dzebhizimisi mari, zvichava kunze yezvinoreva yaipedzerwa mutemo.
kuwedzera kune, avo dzesangano uye, nekuti rubatso kwakadaro oga nokukwereta kuti ane chisingazobudiswi kufukidzwa, kana, mune nyaya nokukwereta kwave yakataurwa yaipedzerwa yemirau, mamiriro nokuvapa chaiyo wakare uye rubatso uchakwanisa kubvisa.
kusanganisira nevatengi mari, kuti kuongorora kukwereta mari kubva zvemari masangano, mashoko ose "munhu kuita chikumbiro," akadai mari uye maitiro uchava kuita. Kunyange chikwereti
mari, kana zvikaonekwa kuti mamiriro ezvinhu, iyo inogona kuripirwa kure pasina kuitwa derailed pakati, kuongorora zvakare achapfuura pasina zvinetso.
Ukuwo kuti, vanoda kukwereta mari ezvinhu umo ezvinhu aripo uye kare asingaoneki, kana kamwe zvikaonekwa kuti kwete chete kuti kujeka mutsividzo plan, chiri kazhinji akataura ndiko kuve mhosva padariro gwaro yokudzokorora.
For nokukwereta ezvinhu, kunyange kana akaita chikumbiro nemamwe masangano zvemari, nokuda chikwereti ruzivo sangano yave kugovana ruzivo.
kana, uyewo tiine mukana kuedza kusimbisa Angadai chinorondedzerwa mashoko vamwe mhando kana waita vawira kuongorora. Uye
yakarurama, kana uri kuita akashambidzika toronga chemhosva, unofanira kuva kukwereta mari sezvo achida. Kusanganisira
nevatengi mari, kuti kuongorora kukwereta mari kubva zvemari masangano, mashoko ose "munhu kuita chikumbiro," akadai mari uye maitiro uchava kuita. Kunyange chikwereti
yakarurama, kana uri kuita akashambidzika toronga chemhosva, unofanira kuva kukwereta mari sezvo achida.